हिमाली स्वरहरु – डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइते
डा. कृष्णहरि बराल मोटर दुर्घटनामा सख्त घाइते
नेपाली साहित्यका समालोचक एवं वरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बराल अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुको स्थलमार्गबाट भ्रमण गरिरहेको बेला मोटर दुर्घटनामा पर्नु भएको छ । पत्नी श्रीमति सुष्मा बराल, छोरा स्वप्नील र छोराको साथी सन्तोष अधिकारी सहित चार जनाको टोली उक्त भ्रमणको शिलशिलामा बोष्टनबाट ओहायो गैरहेको बेला यही जनवरी २ २०१० आइतबार साँझको समयमा पेन्सिलभेनियाको I-80 Highway मा अकस्मात उक्त दुर्घटना भएको हो |
गाडीमा सवार चारैजनालाई एम्बुलेन्सव्दारा तत्काल State Park स्थित Mount Nittany Medical Center मा पुर्याईयो । दुर्घटनामा पर्नेहरुमध्ये श्रीमती बराल स्वप्नील र सन्तोषलाई साधारण उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको छ तर डा. बराल उक्त दुर्घटनाबाट सख्त घाइते हुनु भएको समाचार छ । वहाँको उपचारको क्रममा डाक्टरहरुले पत्ता लगाए अनुसार केही रक्त-नशाहरु -Artery ruptures_ फुटेको र पेटभित्र रगत बगिरहेको पाइएकोले वहाँलाई तत्कालै हेलिकप्टरबाट Danville, PA स्थित Geisinger Medical Center मा पुर्याइयो र सिधै अपरेसन कक्षमा लगियो । तर सर्जनहरुले रगत बगिरहेको नरोकिएसम्म सर्जरी गर्न नसकिने कुरा बताए । त्यसैले उहाँलाई पर्याप्तमात्रामा रगत दिईसकेपछि ४ जनवरीका दिन सर्जरी पूर्ण सफलताकासाथ सम्पन्न भयो । त्यसपछि १५ जनवरीसम्म उहाँलाई आई.सि.यु.मा राखि उपचार गरियो र हाल वहाँलाई साधारण वार्डमा सारिएको छ । पारिवारिक सुत्रका अनुसार अब वहाँ गम्भीर खतराबाट भने मुक्त हुनुहन्छ तर पनि अहिलेसम्म अस्पतालमै वहाँको उपचार भैरहेको छ ।
आफ्नो छोरा स्वप्नीलको दिक्षान्त समारोहमा भाग लिन नेपालबाट गत महिना अमेरिका आउनुभएका बराल दम्पति यही फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता नेपाल फर्किने योजना थियो । अचानक उक्त दुर्घटना हुन गएकोले डाक्टरहरुको सल्लाह बमोजिम वहाँहरुको अमेरिका बसाई लम्बिने भएको छ । वहाँहरु भिजिटर भएको र छोरा पनि विद्यार्थी नै रहेकोले वहाँहरुलाई यस आपतकालिन अवस्थामा आर्थिक संकट पर्न गएको छ । अतः अमेरिकामा बसोबास गर्ने साहित्यकार कलाकार तथा मानवीय समवेदनामा बिचार पुर्याउने सबै महानुभावहरुसंग आर्थिक सहयोगको लागि आव्हान गर्दछौं ।
यसका लागि हामीले (PayPal) पेपाल मार्फत कृष्णहरि बराल सहयोग कोष खाता खोलेका छौँ । निम्न कृष्णहरि बराल सहयोग कोष लिँकमा गएर आफुले सक्दो आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गदछौँ
वहाँका बारेमा विस्तृत जान्न परेमा निम्न महानुभावहरुसंग सम्पर्क गर्नुहोला ।
-ज्ञानेन्द्र गदाल, कोलोराडो ३०३ २२९ २०३९
-बासु श्रेष्ठ, भर्जिनीया ७०३ ३३८ ७८२८
-स्वप्नील बराल, हाल पेन्सिलभेनिया: ८१७ ३३३ ७१७०
आर्थिक सहयोग र मानवीय सद्भावनाका लागि सबै महानुभावहरुमा अग्रिम आभार प्रकट गर्दछौँ ।
कृष्णहरि बराल सहयोग कोष लिँक